Ifektri yamakhemikhali e-Laser - Abakhiqizi baseChina Abakhiqizi, Abahlinzeki
Sinikeza ukuhlukahluka kwamakristalu wekhwalithi ephezulu we-laser, ngokugxila okuhlukile, ama-ion e-doping ahlukile; imininingwane ngokusho kwezicelo, kufaka phakathi i-Neodymium Doped Yttrium Aluminium Garnet (Nd: YAG), Erbium Doped Yttrium Aluminium Garnet (Er: YAG), Holmium Doped Yttrium Aluminium Garnet (Ho: YAG) ； Erbium ne-ytterbium co-doped phosphate glass (Er: Ingilazi) njll., Kuyehluka ngezinketho nezixazululo ezinikezwe yi-DIEN TECH.
Nd, Cr: Amakristalu we-YAG
I-laser ye-YAG (yttrium aluminium garnet) ingahlanganiswa ne-chromium neodymium ukuze ithuthukise izici zokumunca ze-laser. I-laser ye-NdCrYAG iyi-laser yesimo esiqinile. I-Chromium ion (Cr3 +) inebhendi lokumunca elibanzi; ithatha amandla futhi iwadlulisele kuma-neodymium ions (Nd3 +) ngendlela yokusebenzisana kwe-dipole-dipole. I-Wavelength ka-1.064 µm ikhishwa yile laser.
Nd: Amakristalu we-YAG
Nd: YAG crystal induku isetshenziswa Laser wokugubha umshini kanye neminye imishini laser.
Yizinto kuphela eziqinile ezingasebenza ngokuqhubekayo ekamelweni lokushisa, futhi iyikristal ye-laser esebenza kahle kakhulu.
Er: Amakristalu we-YAG
Er: YAG uhlobo oluhle kakhulu lwe-2.94 um laser crystal, elisetshenziswa kakhulu ohlelweni lwezokwelapha lwe-laser nakweminye imikhakha. I-Er: I-YAG crystal laser iyinto ebaluleke kakhulu ye-3nm laser, nomthambeka osebenza kahle kakhulu, ungasebenza ekamelweni lokushisa le-laser, i-laser wavelength ingaphakathi kwebhande lokuphepha kweso lomuntu, njll. ibisetshenziswa kabanzi ekuhlinzeni umkhakha wezokwelapha, ubuhle besikhumba, ukwelashwa kwamazinyo.
Ho: Amakristalu we-YAG
Ho: YAG Ho3+ Ama-ions afakwe kumakristalu we-laser avikelekile akhombise iziteshi ze-laser eziphakathi kwe-14, ezisebenza ngamamodi wesikhashana kusuka ku-CW kuya kumodi ekhiyiwe. Ho: I-YAG ivame ukusetshenziswa njengezindlela eziphumelelayo zokukhiqiza ukuphuma kwe-2.1-μm laser 5I7- 5I8 inguquko, yezinhlelo zokusebenza ezinjenge-laser sensing remote, ukuhlinzwa kwezokwelapha, nokumpompa ama-Mid-IR OPO's ukufeza ukuphuma kwe-3-5micron. Amasistimu akhishwe ngqo e-diode, ne-Tm: Uhlelo lwe-fiber Laser olukhishwe lubonise ukusebenza kahle kwe-slope, abanye basondela kumkhawulo wethiyori.
Ce: Amakristalu we-YAG
I-Ce: I-crystal ye-YAG uhlobo olubalulekile lwamakristalu e-scintillation. Uma kuqhathaniswa namanye ama-scintillator angavamile, i-Ce: I-YAG crystal iphethe ukusebenza okukhanyayo okuphezulu kanye ne-pulse ebanzi yokukhanya. Ikakhulukazi, ukuphakama kwayo okungu-550nm, okuhambisana kahle nokuzwela ukuthola ubude besikhathi sokutholwa kwe-silicon photodiode. Ngakho-ke, ilungele kakhulu ama-scintillators ezinto ezithathe i-photodiode njengamtshina kanye nama-scintillator ukuthola izinhlayiya ezikhokhiswa ukukhanya. Ngalesi sikhathi, ukusebenza kahle kokuhlangana okuphezulu kungatholakala. Ngaphezu kwalokho, i-Ce: YAG nayo ingasetshenziswa ngokujwayelekile njenge-phosphor kuma-cathode ray amashubhu kanye nama-diode amhlophe akhanyisa ukukhanya.
I-CTH: Amakristalu we-YAG
Ho, Cr, Tm: YAG -yttrium aluminium garnet laser crystals doped with chromium, thulium and holmium ions to provide lasing at 2.13 microns are getting more and more applications, ikakhulukazi embonini yezokwelapha. isebenzisa i-YAG njengomsingathi. Izakhiwo ze-YAG zomzimba, ezishisayo nezibonakalayo zaziwa futhi ziyaqondwa yibo bonke abaklami be-laser. It has izicelo ebanzi ekuhlinzeni, amazinyo, ukuhlolwa emkhathini, njll